Rasmi: Filimka Simmba oo ganacsi adag sameeyay Arbacadiisa kowaad – Filimside.net
Rasmi: Filimka Simmba oo ganacsi adag sameeyay Arbacadiisa kowaad
Ranveer Singh filimkiisa Simmba ayaa wacdaro aan caadi ahayn Boxoffice-ka ka dhigaayo madaama uu keenay 14 Crore (Trade Figure) Arbacadiisa kowaad weliba ayadoo qiimaha tikit-ka hoos loo dhigay sidoo kalena fasaxii dhamaaday ayuu ganacsi adag sameeyay filimkan Action-ka ah oo daawadayaasha siweyn usoo jiidanayo.
Simmba wuxuu sameeyay 30% hoos u dhac ah maalinitii shalay ahayd marka lala bar bar dhigo maalintiisii kowaad taasi oo ka dhigan in Simmba weli si adag u gadmaayo kana dhigan tahay inuu tiyaatarada mudo baaqi kusii ahaan doono.
Simmba waa SUPER HIT sidoo kalena BLOCKBUSTER inuu noqonaayo waxaa la ogaan karaa sida uu Jimcadiisa labaad u gadmo ganacsi ahaan sidoo kalena waa hubaal inuu noqon doono HIT-ka sedexaad ee 2018 ugu weyn.
Simmba waa filim dhamaan gobolada Hindi marka laga reebo (Tamil Nadu / Kerala) oo uu xoogaa ku yara liito balse inta kale siweyn ayuu kaga gadmayaa waxaana xusid mudan in West Bengal kaliya uu 7.25 Crore mudo lix maalmood ah kasoo xareeyay wuxuuna halkaas ku dhaafay filimka Baaghi 2 ganacsiga uu cimri ahaantiisa ka sameeyay.
Simmba mudo lix maalmood ah 138 Crore ayuu sare u dhaafay sidoo kalena 150 Crore ganacsi ahaan wuxuu ku dhawaan doonaa marka uu todobaadkiisa kowaad dhameesto wuxuuna noqon doonaa filimka labaad ee 2018 todobaadkiisa kowaad ganacsiga ugu badan sameeyo kaliya Sanju ayaa ka badnaan doono sidoo kalena filimka 11-aad ee taariikh ahaan todobaadkiisa kowaad lacagaha ugu badan soo xareeyo.
Fadlan hoos kaga bogo mudo lix maalmood ah ganacsiga uu sameeyay soona daabacday shabakada Boxoffice India (BOI):
Wadarta Guud – 138.75 Crore (Trade Figure)